Jodasy Makabeo - Wikipedia
I Jodasy Makabeo na Jodà Makabeo dia mpisorona isan'ireo atao hoe Kohena, zanaka fahatelo sady mpandimby an'i Matatià (na Matatiasy) rainy tamin'ny fitarihana ny fikomian'ny Jiosy hanohitra ny mpanjaka seleokida Antiokosy IV Epifanesy, izay nanazimbazimba ny Tempoly jiosy, sy niady tamin'ny Jiosy mankasitraka ny fampivoarana ny kolontsaina jiosy amin'ny fampifangaroharoana azy fomba grika. Isan'ireo mpitari-tafika nalaza teo amin'ny tantaran'ny Jiosy izy izay nahataona lehilahy mpiady anarivony ka nandresy ny tafika siriana tamin'ny ady nifanaovany tamin'ny taona 166 sy 165 tal. J.K.
I Jodasy Makabeo, 1860.
Atao hoe יהודה המכבי / Yehudah ha-Makabi izy amin'ny teny hebreo.
Tamin'ny volana Desambra taona 165 tal. J.K. izy dia nitarika ny tafiny hatrany Jerosalema ka nahazo ny Tempoly izay efa nampiasaina hanompoana ireo andriamanitra grika nandritra ny telo taona teo aloha, ka nanao fanadiovana ny Tempoly sady namerina indray ny fombam-pivavahana jiosy. Nanao fanafihana mitam-piadiana matetika i Jodasy mba handreseny ny fahavalony ao Jodea sy ny manodidina. Taorian'izany, tamin'ny taona 163 tal. J.K. dia nanome fahaleovan-tena ara-pivavahana ny Jiosy ny fanjakan'i Siria. Nilofo koa i Jodasy avy eo hahazo ny fahaleovan-tena ara-politikan'ny Jiosy, ka ny Romana no nanampy azy tamin'izany. Ny tsy fifanarahan'ny samy Jiosy no tsy nampahomby an'izany fihetsiketsehana izany. Tamin'ny taona 161 i Jodasy dia nahazo fandresena miezinezina ny tafika siriana tao Beta-Horona (Beth-Horon) ao avaratra andrefan'i Jerosalema, nefa maty tamin'ny ady nifanaiovany tamin'ny Siriana tao akaikin'i Elsa izy taorian'izay.
Mba fahatsiarovana ny fanadiovana sy famerenana ny hasin'ny Tempoly dia mankalaza ny fety atao hoe Hanokà (Hannukkah) isan-taona ny Jiosy mandraka ankehitriny.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Jodasy_Makabeo&oldid=973611"
Dernière modification le 28 Aogositra 2019, à 18:21
Voaova farany tamin'ny 28 Aogositra 2019 amin'ny 18:21 ity pejy ity.